Wadaad iyo dhalinyaro, fahamka qalloocday!! W/Q: Dr-Jamal Abdirahman Bulale
Sunday May, 27 2018 - 14:32:31
Monday January 29, 2018 - 10:53:21 in by Burco Office
Diinta muddo badan oo aan baranayay waxan u bartay in aan aqoonteeda layga xigsan, fahamkeedana laygu addoonsan.
Wan ku guulaystay taas, waxana aan awood u yeeshay baahiyahayga diimeed inaan ka adkaado aqoonteeda iyo ku dhaqankeeda. Waxan arkay dhalinyaro badan oo isku khalday wadaadka iyo diinta. Waxay aamineen in wadaadku diinta leeyahay, halkii ay ahayd inay u arkaan in diinta Alle leeyahay. Waxay ilaaween in wadaadku Aadame yahay; khaldami karo, saxnaan karo, shaqaysan karo, tartami karo, se aqoonta diinta ay u baratami karaan, kala aragtina qabi karaan se ay wada yihiin dad Islaam ah.
Waxa ay qaar badan cadhadii wadaadka qaldan ay u qabeen ay kula dhaceen Islaamkii iyo wadaaddadii kale ee bilaa eedda ahayd. Waxa ay iska dhaadhiciyeen in iyagaa diinta laga xigo, ilaa gadh weyn iyo khamiis ay qaataana aanay aqoonteeda dhex geli karin, taas oo ah fikrad sii kala fogaysay wadaadka iyo dhalinyarada. Sidoo kale waxa jirta in wadaadkeenu aanu jeclayn dhalinyarta shaadhka iyo surwaalka xidhan, dhinacyada xiiran, surwaalka dheer, suudhka xidhan iyagoo dhalinyartaasi ay xishood ka qaadeen in ay wadaadka hor fadhiistaan, hadday hor tagaanna uu ka xanaaqayo ama waji adag uu ku qaabilayo, taas oo ah mid jirta marka aan dib u jalleeco masaajidadeena wadaadada jooga. Si ka duwan muuqaalkan waxa aynu safka hore ee jimcaha iyo salaadaha ciidaha u banaynaa tuugta xoolaha ummadda iyo agoomaha cunay ee dhexda ka wada xidhan. Marka miisaanka diinteena la saaro ma kala dambi yara dhalinyartaas fisqiga yar ku jira iyo nimankaas dharaarta xoolaha ummadda guryaha ka dhista; waxa xaq ahayd in isku si loola dhaqmo laakin may dhicin taasi.
Kala fogaanshahaas wadaadka iyo dhalinyaradu waxa uu qoomay aqoontii diinta ee dhalinyarta. Weliba marka dhalinyartaasi ay u baxaan qurbe, safar ama dhul aan diintu ku badnayn. Muuqaalada u badan ee la arko xilliyadan waxa ka mid ah in aqoontii salaadda ay waayaan cid ay weydiiyaan, horena aanay aqoon uga sii haysan. Tusaale ahaan, safar dheer oo diyaaradeed annagoo ku jirna ayaa dhawr salaadood oo faral ah isku kaaya gaadheen, dabcan cudur daar waanu haysanaa. Markii safarkii dhamaaday ayan wiilkii ila socday ku qancin kari waayay in salaadahaas na dhaafay la qallaynayo, halka uu ka aaminsanaa in ta u dambaysa uun ay waajib ku tahay. Waa muuqaal ay ahayd in qof muslim ahi uu aqoon u yeesho, doodna aanu ka keenin. Waxa sidoo kale dhalinyarada qurbaha u baxda u dheer in tashuush badan lagu furayo oo diintooda la xidhiidha iyaguna aanay aqoon heerkaas gaadhsiisan lahayn. Muddo yar waxan la kulmay su,aalo badan oo aanan ku talo gelin, qofka aan aqoonta diintu ku badnayna uu ku hafanayo.
Waxa kale oo saameyntiisa leh in dhalinyarada maanta waxbaratay ay aad wax u akhrido, meesha keli ah ee afkaarta ay ka qaataana ay buugaagta noqotay, taas oo keentay in fikrado badan ay helaan. Waxa kaloo xusid mudan in dhalinyaradaasi ay yihiin kuwo aqoon fiican, afkaartaasna faafin kara, difaaci kara si kasta oo ay noqoto ee aanay ahayn carruur dugsi sare ku jirta oo waalidkood la nool. Waxa badankoodu aanay awood u lahayn in ay fikrad diimeedka kala hufaan, waana sababta aad u arkayso iyago isku daraya wadaadka iyo diinta, Maxamed Binu Cabdiwahaab iyo diinta, Bukhaari iyo Nabi Muxamed xadiisyadiisa.
Aragti ahaan waxan qabaa in dhalinyaradu diinta ay barato si ay xor u noqdaan. Markaas bay fikir diini ah fahmi karaan, dhaliili karaan, difaaci karaan, balse qof aan salaaddii iyo soonkii fahamsanayn ma kala saari karo wadaadka iyo diinta, faham sax ahna masoo gudbin karo. Wadaaddadana waxa la gudboon in dhalinyaradu aanay ka fiigin ee ay soo dhaweeyaan, si aanay u sii kala fogaan isla markaana ay barnaamijyo diimeed u qabtaan. Waa in dhalinyarta jaamacadaha diintooda la tayeeya si mustaqbalka dadka, dalka iyo naftiisaba uu wax u taro, balse wadaadkeenu waxa uu xooga saaraa inanka miyiga ka yimi ee maskaxda furan ee Naxwaha sida fiican u qaybi kara, quraankana xifdiyi kara, balse ma jecla qofka waxbarashada maaddiga ah barta. Aragtidayda ka aqoonta maaddiga ah bartaa aad buu muhiim u yahay, waayo waa hoggaamiyaha berri, waa soo saaraha afkaarta cusub, waana qof fahamsan wax badan oo diin iyo maaddi ah. Sidoo kale waa qofka ka hor tagi afkaaraha kale ee gaalada. Tusaale ahaan, Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil, waa sheekha loogu dhegeysi badan yahay looguna jecelyahay, taasna waxa u sabab ah aqoontiisa labada dhinac ka dhisan, ee Gaal iyo Islaamba fahmayaan. Waxa uu awood u yeeshay in uu fahamka Islaamka ballaadhiyo, waana sheekh aanad marnaba ka didayn oo aragti ballaadhan.
Wiil bilaa diin ah ban la kulannay, kadib waxa uu noo sheegay in aanu diin iyo Ilaahay toona rumaysnayn. Qofka noocan ah waajibka kaa saaran waa mid weyn, Quraan iyo Xadiisna maba aaminsana, se waxa la rabaa inad Science ku tusto jiritaanka Alle, kadibna diinta ugu yeedho. Qofka markan labadaas isku sita ayaa awood u leh la hadalkiisa, si fududna u fahamsiin kara, halka wadaaddada qaar ay dili lahaayeen.
Wadaadow diinta fahamkeeda iyo faafinteeda ballaadhi dhalinyaroyna diinta baro.
W/Q: Dr-Jamal Abdirahman Bulale
Pakistan:-Nin Dhalinyaro Ah Oo Gilgilay Millatariga Dalka Pakistan
24/04/2018 - 10:21:43
Muqdisho:- 13 Dhalinyaro Maxaabiis laga keenay dalka Libya oo Muqdisho la soo gaarsiiyay.
08/03/2018 - 08:44:59
07/03/2018 - 16:31:07